idizili pellet,umatshini osebenzayo owenza i-diesel pellet wenza umatshini wokutya inkukhu
Kuyaziwa ukuba idizili pellet Olona khetho lufanelekileyo kubantu abafuna ukunciphisa iindleko ekusebenziseni amandla. Olu hlobo lomatshini wedizili yedizili luveza ubungqina bento yokuba ingasetyenziswa kwimimandla emininzi ngakumbi kwiindawo ezikude apho amandla anqongopheleyo..
Ngokubanzi, Injini yedizili isetyenziswa koomatshini abancinci bokufa kweepellet kwaye ukusetyenziswa kwayo kukhulu kakhulu. Ngabantu abaninzi nangakumbi yindlala yokusebenzisa umbethe wepellet ukudala ubushushu kusapho lwabo, ke iimfuno zokwenza imayile ye-pellet ngenjini yedizili nayo iyanda namhlanje.
Kutheni ukhetha I-Diesel Pellet Mill
1. Iindleko ezingaphezulu
Ixabiso loomatshini beDiesel Pellet Mill ayisiyombali. Inyaniso, Abanini bamakhaya abaninzi ngoku banakho ukuhlawula iimilimitha ezingamashumi amane. Ukusetyenziswa okuncinci kwamachiza eedizili pellet kukwanda. Into ekufuneka uyenzile kukuthenga umatshini owenza udizili kwinkampani eyaziwayo. Oku kuyakuqinisekisa ukuba ufumana owona matshini ubalaseleyo. Iya kuqinisekisa ukuba awuphanjwanga. Umatshini wokwenza idizili owenza ukuba uthenge uya kulingana nazo zonke iimfuno zakho zepellet. I-Amisy iya kufezekisa yonke ingcinga yakho kwiimayile ze-pellet.
2.Akukho mda wamandla
Zininzi iindidi zerhasi ye-pellet kwimarike: I-Ring Die pellet mill kunye neFlat die pellet Mill. Iring die pellet mill yaways asetyenziswa kwimveliso yemizi-mveliso kwaye ibiza kakhulu kuneglasi yokufa kweepellet. Kwishishini elincinci kunye nokusetyenziswa kwekhaya, imayile yokufa ethe tyaba yeyona kufa ilunge kakhulu ngexabiso elingenaxabiso kunye nomthamo ofanelekileyo wemveliso.
Apha sinikezela ngeentlobo ezimbini zoomatshini bokuhambisa ipellet abaqhutywa ngamandla: Ukuqhutywa kombane kunye neDiesel. Zombini zilungele imveliso yasekhaya. Nantsi ingongoma ephambili yokukhetha i-Diesel pellet mill. Iqhutywa yinjini yedizili, yenza ukuba ukuveliswa kwepellets kwenzeke ikakhulu kwiindawo ezisemaphandleni ngokushokoxeka kombane. Kwaye idizili kulula kakhulu ukuyifumana phantse kuyo yonke indawo.
3. Kulula ukusebenza kwifama ekufutshane
Ngomatshini weDiesel Pellet Mill, Inkqubo yokwenza i-pellets kunokuba lula kakhulu. Emuva koomatshini bokuchwetheza ngo-1970 kwasetyenziswa ngokuyintloko ekuveliseni ukutya kwezilwanyana, nangona kunjalo, njengoko ixesha lihamba, Ukusetyenziswa okungaphezulu okungcono kwezigayo kwaqaliswa ngoomatshini bokushicilela i-dizeli kusetyenzwa kungekuphela ekusetyenzisweni kokutya kwezilwanyana kodwa nakwizinto ezenziwe ngeenkuni ezinokusetyenziselwa ipetroli xa kushushu indlu. Ngokubanzi i-biomass ipetroli iye yathathelwa ingqalelo kakhulu kunakuqala. Uya kufumanisa ukuba uninzi lwabavelisi abancinci beepellet bathanda ukukhetha oomatshini bokuchwetheza abasebenza nge-dizeli.
Izibonelelo zeNjini yeDiesel yokuTya iPellet Mill
1. Iqhutywa ngu injini yedizili.
2. Iiroli kunye nokufa zenziwe kwizinto ezichanekileyo zensimbi yealloy, nto leyo ebangela ukuba eli candelo lingadibani kwaye kungabi lula ukwahlukana nalo.
3. Kulula ukufumana izixhobo: umbona, ingqolowa, isoya, ingca, alfalfa, umququ, irayisi hull kunye nokunye.
4. Unokwenza iitapile zokutya zeenkukhu kunye nemfuyo, njengenkukhu, idada, umvundla, yehagu, njl.
5. Ngokutshintsha i-pellet mill iyafa, unokwenza i-pellets zokutya ngeadayimitha ezahlukeneyo ngeglasi yokuhambisa enye.
6. Isicelo sobushushu okanye somphunga asifuneki kwi-pelletizing. Ngaphandle kokongeza nayiphi na i-binder, Inako ukuqhubekeka ngokuthe ngqo kwimfumba yokutya okuziinkozo.